Vacuum cleaner omkhathi ziye zaba ingxenye yezimpilo zethu, okwenza eyisicefe kanye isikhathi eside yokuhlanza elula futhi kulula ukuyenza. ukhiqiza zabo ezihlukahlukene izinkampani. Ukwakhela phezu kwasiphi ukusivimba?
I eqinile Samsung buthola emakethe
Le nkampani "Samsung" liye langena emakethe ngo-1969 futhi ngokushesha lwehla uvalo ukunakwa nabalandeli emhlabeni jikelele. Izinga kanye nokwethembeka idume ekhaya layo zikagesi. Vacuum cleaner omkhathi "Samsung" kukhona isibonelo esihle kakhulu imishini yesimanje for ekhaya. Ziyakwazi okunokwethenjelwa futhi kulula ukuyisebenzisa ngokuhlanganyela i ezingabizi price tag.
Vacuum cleaner omkhathi babe imiklamo ezahlukene, izici, amandla, futhi-ke, intengo. Uma ukhetha kufanele sinake amandla ukuncela, esithinta ngqo izinga yokuhlanza. Amandla edingekayo ibalwa, ikhumbula ukuthi wawungakanani ikamelo kanye nenani uthuli kuwo. Ukuhlanza, okuyinto kusetshenziswa le ekhaya Imishini kungaba ezomile futhi olumanzi.
Vacuum cleaner omkhathi for yokuhlanza dry
Phakathi kwabo kuncike design zihlukaniswe ngamaqembu 3:
Cleaner wezindlu nge ngalendoda uthuli lokuqoqa izintuli nokungcola ku iphepha (alahlwayo) noma indwangu (esebenza) esikhwameni. Ziyakwazi ephelelwe yisikhathi ngenxa yokuthi ukuthi ulahlekile uthuli micro-izinhlayiya emoyeni, kodwa namanje ethandwa.
Cleaner wezindlu "Samsung" aquafiltering libhekene ne izinga okusezingeni emoyeni uhlanzekile, ngoba ukubambezeleka cishe u-100% uthuli falling ngaphakathi. izinga okunjalo sibonga kungenzeka zokuhlanzwa indlela ekhethekile. It ezithwala ukusakaza emoyeni okunobuthi ngokusebenzisa samanzi equkethe. Lokho amanzi azigcina uthuli nezibi. Umoya bahlanza sidla emuva ku imvelo futhi kwakha umuzwa freshness. Ngenxa yalokho, i-vacuum cleaner, "Samsung" nge aquafiltering uyazihlanza hhayi kuphela ebusweni kodwa futhi wezasemoyeni. Ngaphezu kwalokho, moisturizes namakha emoyeni egumbini. Futhi "Samsung" cleaner wezindlu ifakwe aquafiltering Turbo ibhulashi, esiza ususa okhaphethi ukungcola ekhethekile, kuhlanganise dander isilwane. Enye inzuzo ukuthi vacuum aqua - Ngokuqhubeka amandla ukuncela kungakhathaliseki degree of ukugcwaliswa isitsha, ngokungafani kuya vacuum cleaner nge ngalendoda uthuli. I yokuntula of zinhlobo abanjalo bangabaphostoli eziphezulu, usayizi esikhulu nesisindo. izihlungi Water e-vacuum cleaner omkhathi kungenzeka alfafiltrom ne isihlukanisi futhi hookah (bubble).
Ngo uhlobo ukuhlukaniswa usebenzisa amanzi kuphela ngaphandle kwezihlungi ukungena nakwamanye amazwe. Nge obishini enamandla wawathumba wonke udoti. Emva amanzi yokuhlanza amuncekela. Ngenxa yokuthi vacuum cleaner kungekho izihlungi ukungena nakwamanye amazwe, baba angadingi uhlambulule kanye omiswe. Kodwa kukhona lokhu vacuum cleaner eqolo.
Uhlobo cleaner wezindlu ka-hookah ishibhile, kodwa ethile yayo wukuthi emva wokuhlanza ngamunye udinga ageze futhi asule izihlungi ukungena nakwamanye amazwe hhayi ukuzalela amagciwane. Ngaphezu kwalokho, izihlungi zidinga esikhundleni njalo.
I ehlanzekile cyclonic "Samsung" - ekahle imvelo ekhaya. Yena osebenzisa umoya Kuvunguza angcolile e-isitsha plastic. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthuli bephonsa phezu kodonga isitsha futhi aphume emoyeni wezindlu ahlanzekile.
Vacuum cleaner omkhathi yokuhlanza ezimanzi
Uma ufuna ukuqoqa uthuli hhayi kuphela, kodwa futhi ukuze ukumanzisa yokuhlanza, kungcono uthenge wezindlu egeza cleaner. It izifutho amanzi, bese encela uthuli elina owubhuqu ngalendoda uthuli.
Kuthiwani uma kukhona lokushisa kwehliswa ingane?
Le filimu "Kugcine ebuntwaneni ehlobo": abalingisi, izindima, sakhiwo